I-Closed Loop Cooling Towers Emkhakheni Wokukhiqiza: Ukubuka konke
Ukwakheka kweLimescale kuzinsiza ezibucayi emkhakheni we:
Isithando Somlilo Esiphezulu / Esiphakathi / Esiphansi Esivamile
Metal Injection / Gravity thusi
Kuyingozi ekusebenzeni kahle, ekusebenzeni nasekulondolozweni okuholela ekulahlekelweni okukhulu kulezi Zimboni.
Ukupholisa embonini yokuphonsa kuyindlela ebalulekile njengoba kuthinta izinga lokukhiqiza nokuqina kokusebenza komshini. Ukupholisa kuyadingeka ku:
Ukushisa kwe-induction kusekethe kagesi (noma umlilo wamalahle)
2.Ukupholisa umzimba wesithando somlilo
Isithando somlilo esincibilikayo sisebenzisa isithando somlilo esincibilikisa insimbi, insimbi engagqwali, noma ithusi. Isithando somlilo esivuthayo siyadingeka ukuthi sipholile futhi sigweme ukushisa okuphezulu kwimishini. Uma ukuvinjelwa kwepayipi lamanzi, nge-limescale kuphazamisa ukupholisa, lokhu kuzolimaza isithando somlilo. Ukuze upholise kahle imishini, ikhwalithi yamanzi ihamba phambili kakhulu.
Ubungozi be-limescale eMbonini Yezokukhiqiza
Amanzi apholile wekhwalithi enhle abaluleke kakhulu embonini yokusakaza kakhulu. Yisizathu sokuthi amanzi amsulwa asetshenziswe njengoketshezi olupholisa isithando somlilo.
Uhlelo lokupholisa olusebenzisa i-Open Cooling Tower nge-plate heat exchanger lunezinzuzo nezingozi zalo:
Umbhoshongo ovulekile wokupholisa uyintengo eshibhile, nge-Capital Investment encane
Umbhoshongo ovulekile wokupholisa awukwazi ukuhlukanisa i-limescale
Plate sokushisa ukushabalalisa ngempumelelo ukushisa ekuqaleni, kepha ukusebenza kahle kunciphisa isikhathi esithile.
I-Limescale kulula ukwenzeka ezinhlotsheni zokushisa zokushisa zohlobo lwepuleti
Ihlala isikhala esincane nge-plate heat exchanger
I-Limescale ekushintshaneni kokushisa ineqhaza ekusebenzeni okuphansi
Imbangela yokuwasha i-acid ekulimaleni kokushintshisana ngokushisa
Ngombono wesikhathi eside, ukuzinza kwe-SPL yokuvalwa kombhoshongo wesifunda kuvaliwe kakhulu kunokushintshana kokushisa kwepuleti. Ngakho-ke, i-SPL ingaphakamisa ukufaka esikhundleni sombhoshongo Wokupholisa Wohlobo Ovulekile ngombhoshongo wokupholisa wesifunda ovaliwe.
Kunezinzuzo eziningana ze-SPL Closed Circuit Cooling Tower:
Ukwanda kwendawo yokusabalalisa ukushisa, ukunciphisa amandla okwakhiwa kwe-limescale
2.Iqedela isidingo sokugcwalisa njalo amanzi ukuvimbela ukuhlushwa kwe-limescale
3.Ukuncipha kwesimo sokuvala esibangelwa ukushisa ngokweqile